Warsaxaafadeed: Maamulka Galmudug oo sheegay ineey Diyaar u yihiin dhaqangalinta xabad joojinta lagu baaqay – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
by admin 24th November 2015 027
K24 — Maamulka Galmudug ayaa soo dhoweeyay dadaalada nabadeed ee ay wadaan Odayaasha iyo ganacsatada deegaanka, iyadoo cadeysay inay dhaqan gelineyso heshiiskii xabad joojinta ahaa ee shalay looga dhawaaqay Gaalkacyo.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa lagu sheegay in dagaalkii 22-kii bishan ka dhacay Gaalkacyo uu ahaa daan daansi cad oo Puntland ku dooneysay inay ku wiiqdo nabadgelyada iyo horumarka Galmudug.
Hadaba war saxaafadeedka ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Galmudug halkan hoose ka akhriso:-
WAR SAXAAFADEED: U HOGGAANSAMID GO’AANKA ERGADA NABADDA
Dowlad-Gobaleedka Galmudug waxay caddaynaysaa in ay si buuxda u taageersantahay waan waanta ay wadaan odayaasha iyo ganacsatada deegaanka. Waxay sidoo kale caddaynaysaa falkii dhacay 22nd Nov, 2015 oo ay Puntland kusoo weerartay Saldhiga Booliska Dowlad-Gobaleedka Galmudug ee Magaalada Gaalkacyo in uu ahaa daan-daansi cad oo ujeedkiisu aheyd wiiqidda nabadgelyada iyo horumarka Galmudug, gaar ahaan, dadaallada socda sida; la wareegidda hubka, nidaaminta maleeshiyo-beeleedyada, daa dajinta maamulka iyo isu diyaarinta ka saaridda Shabaab dhammaan deegaannada Galmudug.
Galmudug waxay mar kale u caddaynaysaa umaada Soomaaliyeed, Dowladda Federaalkaa iyo Beesha Caalamka mabaadii’deeda asaasigaa oo ah:
1) Nabad-ku-wada noolaasho
2) Xoojinta Xiriirka Dowlad-Gobaleedyada deriska la ah Galmudug
3) Adkaynta midnimada ummadda iyo dhawridda Qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya
Ayadoo laga ambaqaadayo, mabaadii’dan kor ku xusan, ayaan si rasmi ah u shaacinaynaa:
1. Dhab-u-taageeridda dadaallada ay wadaan odayaasha, ganacsatada iyo waxgaradka deegaanka.
2. Ayididda dhammaan qodobadii ay ku heshiiyeen odayaasha, ganacsatada iyo wax garadka waan waanta wada.
3. In aan dhaqan galinay dhankayaga, qodobada hordhaca u ah heshiiska odayaashu gaareen oo ah:
II. Ku-celinta ciidamada barahoodii hore iyo
III. Ka wada hadlidda wixii keenay dagaalka
Walow aan u hoggaansannay dhankayaga soojeedinta dadka samaha jecel, waxaan la soconaa in Puntland ay u durbaan tumayso dhiillo colaadeed, kuna soo daabulayso magaalada Gaalkacyo hub iyo ciidan. taasoo natiijada ka dhalata ay dhabarka u ridandoonto.
Waxaan ka digeynaa wax kasta oo xagal-daacin kara horumarka guud ee dalku ku taamayo, sida la dagaallanka shabaab iyo qabsoomidda doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya 2016 ka.
Gudiga difaacayaasha Xuquuqda aadanaha oo Maamulka Puntland ka codsaday iney siidaayaan wariye Jaamac deperani
DEG DEG: Magaalada muqdisho oo gordhaw laga soo dajiyay dhalinyaro soomaliyeed oo ku xirneyd xabsi ku yaala dalka…..+Sawirro
Tifaftiraha K24 24th April 2017
XOG: Amisom oo Gobolka Shabeelada Hoose ka Sameysay Fal Argagax oo ka careysiiyay Belaha Daga Gobolkaasi waa maxay?
admin 6th April 2016
Sawirro: Guddoomiye Yarisow oo kormeeray xarunta Ciidanka Ilaalada Deegaanka ee Gobolka
admin 2nd May 2018